Nhau - Yekutanga Yucera's Jobho Unyanzvi Kukwikwidza
Yekutanga Yucera Jobho Jobho Unyanzvi Kukwikwidza
Yekutanga kukwikwidzana kwehunyanzvi hwebasa kweYucera ye zirconia block zvinhu zvakatangwa muna Chikunguru 12 th, iyo yaitsigirwa neGeneral Manager's Office. Chiitiko chese chakakamurwa kuita zvikamu zvitatu: kunyoreswa uye kuongorora, pamakwikwi epamasaiti, uye pikicha yeboka rinopa mibairo. Vanopfuura makumi matatu vakwikwidza vanoita basa rinotyisa re zirconia cad cam mabhuroko pane yakaoma kudzvanya, kutonhora isostatic kudzvanya, chimiro kugadzira, kudhinda uye kurongedza, nezvimwe.
Kuti uwane mibairo yakanaka mumakwikwi aya, vashandi vebazi rezvigadzirwa vakashandisa yavo yekumbozorora kudzidza nekudzidzira zvisingaite, vachitsvaga matipi uye matekinoro ekuvandudza mashandiro ebasa, vachikurudzira zvirongwa zvekugadzirisa, kugadzirisa nzira dzebasa, uye vese vakakwikwidza kukwikwidza mumakwikwi aya pakuburitsa maitiro ecec zirconia block. Vashandi veYucera vakaratidza maitiro avo uye vanoratidza kukosha pamakwikwi aya. Mushure meiyi makwikwi emabasa, paive neboka revanyanzvi vehunyanzvi vane hunyanzvi hwakasimba, hunyanzvi hwekukurumidza, hwakatsiga uye hwakavimbika mhando yakabuda, kusanganisira Luo Feifei, Fan Mingchun, naLiu Feihu kubva pakaoma kudzvanya maitiro, Zhao Xiaoduo kubva kunotonhora isostatic kudzvanya maitiro, uye Jiang Kele anobva kuumbowo hwekugadzirisa maitiro, Li Wanxing, Li Jing, Zhong Yulian, vanobva kudhinda nekurongedza. Iri boka revashandi vakatanhamara rakararama kusvika pane zvaitarisirwa, vakashanda nesimba uye vakarova vanhu vazhinji panguva yemakwikwi e zirconia dental block, uye vakahwina mukwikwidzi mumakwikwi ega ega maitiro, uye vakavandudza mashandiro enguva yekushanda nguva yechinzvimbo chimwe nechimwe kusvika pa10%, iyo yakaratidza muenzaniso wekuvandudzwa kwehunyanzvi hwevashandi ve zirconia oxide block mune ramangwana, uye zvakare yakapa chirevo chekugadziriswa kwematanho ekugadzira zirconia milling block.
Vakwikwidzi vese vakaungana pamusuwo mukuru wekambani kuti vatore chikamu mumhemberero na8: 00 mangwanani muna Kubvumbi 19th. Kutanga, VaLiu, CEO weYucera, vakataura pamusoro pemakwikwi ehunyanzvi ezino zirconia block uye vakazivisa mhedzisiro uye chinhanho chemakwikwi, uyezve vatungamiriri vebazi rezvigadzirwa vakapa mubairo. Vashandi vakapa mibairo uye vakatora foto yeboka. Vakwikwidzi vanomwe vakahwina mukombe we "Gold Medal Player" mumakwikwi aya ebasa re zirconia milling block, uye vakagamuchira mubairo we1,000 yuan nemenduru dzechitupa. Chinangwa chechiitiko ichi chaive chekudaidza vese vashandi kuti vatore uyu makwikwi ehunyanzvi hwebasa semukana wekukurumidza kusimuka pakuenzanisa, kudzidza, kubata, kubatsira, uye kupfuura mukati mebazi, uye ndichiedza kuvandudza hunyanzvi hwakanaka, nekushinga kudzidza hunyanzvi hwebasa, uye nekukurumidza kuvandudza kugona kwekugadzira zirconia multilayer block, kuverengera zirconia block yemhando uye kuzadzikiswa kwezvinangwa zvakasiyana kwakapa zvipo zvakanaka kukurumidza kukura kweYucera.